भारत-पाकिस्तानबीचका सम्झनलायक एकदिवसीय १० खेल- खेलकुद - कान्तिपुर समाचार
काठमाडौँ — लन्डन– क्रिकेटमा दक्षिण एसियाका छिमेकीद्वय भारत र पाकिस्तान भिड्नुपर्छ, त्यसको मज्जा नै बेग्लै हुन्छ । कुनै समय एकै देशका रुपमा थिए, यी दुई । पछि छुटिएका थिए । त्यसको राजनीतिकदेखि सामाजिक बाछिटा अझै पनि यी दुई देश
भिड्दा मैदानमा देखिन्छ ।
के यो उत्कृष्ट खेल थियो त ? थिएन । यो त एकपक्षीय खेल थियो । यसलाई सम्झनुपर्ने कारण के हो त ? उत्तर हो, सबैभन्दा पहिला यो च्याम्पियन्स ट्रफी फाइनल हो । अनि दोस्रो, सबैखाले अनुमान गलत सावित गर्दै पाकिस्तानले उपाधि चुमेको थियो । प्रतियोगिताअगाडि उपाधिका लागि सबैभन्दा बलियो दाबेदार थियो भारत । लिग चरणमा भारतले पाकिस्तानलाई नराम्रोसँग हराएको पनि थियो । फखर जमनको शतक र मोहम्मद अमिरको घातक बलिङसामु भारत टिक्नै सकेन । प्रकाशित : चैत्र २८, २०७६ ०८:३८